Mitady any amin'ny Surge California raha manokatra ny dia iraisam-pirenena i Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Mitady any amin'ny Surge California raha manokatra ny dia iraisam-pirenena i Etazonia
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fanondranana laharana 1 any California dia fitsangatsanganana iraisampirenena, ary efa vonona ny hirohondrohona aorian'ny nanambaran'ny Etazonia ny tetiandro hanokafana ny sisintaniny amin'ireo mpitsidika vita vaksiny. Io fanambarana io dia nampirongatra ny fitadiavana fitsangatsanganana sy famandrihana, manambara mialoha ny andro mazava ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany an'ny fanjakana.
Ny White House dia nanambara ny 20 septambra fa ny mpitsidika iraisam-pirenena vita vaksiny dia afaka manidina any Etazonia raha vantany vao Novambra.
Avy hatrany dia nanomboka nitady fitsangatsanganana fitsangatsanganana kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eropeana sy tranokalan'ny fitsangatsanganana ireo mpivahiny.
British Airways dia nitatitra ny fitomboan'ny fitadiavana 700% ho an'ny fitsangatsanganana any Los Angeles, ary i Skyscanner dia nahitana fiakarana 54% ny fitsidihan'ny mpanjifa mitady hitsidika an'i Etazonia.
Ny Expedia Group Media Solutions dia nitatitra fa miroborobo ny fahalianana amin'ny dian'i San Francisco, mihoatra ny avo roa heny ny fivezivezena ao anatin'ny iray andro taorian'ny fanambarana fanokafana ny sisintany.
“Vonona handray ireo namantsika manerantany i Kalifornia, ary ny tanànantsika dia mamoaka ny karipetra mena ho an'ny vaovao tokana-Traikefa any California mba hahitana, "hoy ny fitsidihana ny filoha sy CEO an'ny California, Caroline Beteta. “Be dia be ny fangatahana mangarahara amin'ny fomba fiaina any California, ary antenainay ny hahita ity orin'asa mierona ity.”
Ny mpitsangatsangana iraisampirenena dia isan'ireo vahiny mahazo vola be any California: Mijanona lava izy ireo ary mandany bebe kokoa, ary mivezivezy mandritra ny tapaky ny herinandro sy amin'ny vanim-potoana tsy an-tampony. Tamin'ny taona 2019, nandany $ 28 miliara dolara tany California ireo mpitsidika iraisam-pirenena, manome fivelomana ho an'ny mpiasa ao California sy fidiram-bola ilaina amin'ny hetra ho an'ny vondrom-piarahamonina manerana ny fanjakana.
Kalifornia no laharana faha-1 any Etazonia, ary manan-danja lehibe amin'ny fanjakana ny mpitsangatsangana iraisampirenena, indrindra amin'ireo tanàna lehibe misy vavahady:
Tany Los Angeles, ny mpitsidika iraisam-pirenena dia nahatratra 56% amin'ny fandaniana fizahan-tany rehetra talohan'ny areti-mandringana.
"Ny fanambarana fa ho afaka hitsidika an'i Etazonia indray ny mpitsidika iraisam-pirenena amin'ny volana novambra dia dingana lehibe iray mandroso amin'ny tantara miverina ao Los Angeles," hoy ny filoham-pirenena misahana ny fizahan-tany any Los Angeles, Adam Burke. “Ny mpitsidika iraisam-pirenena dia misolo tena ny iray amin'ireo fizarana lehibe indrindra amin'ny tsenan'ny LA - tamin'ny taona 2019 fotsiny, dia nandray vahiny mitentina 7.4 tapitrisa manerana izao tontolo izao izahay. Tsy ny mpitsidika iraisam-pirenena ihany no misy fiatraikany ara-toekarena lehibe, fa izy ireo koa dia mandray anjara amin'ny kolontsaina mivelatra sy isan-karazany ary tsy afaka ny ho faly kokoa mandray azy ireo hiverina any amin'ny tanànan'ny anjely isika. ”
Tamin'ny taona 2019, ny mpitsidika iraisam-pirenena dia 12% amin'ny fandaniam-bolan'ny fizahan-tany any Anaheim sy 33% amin'ny fandaniana fizahan-tany ao amin'ny County Orange.
"Miarahaba ireo mpitsidika iraisam-pirenena 4.6 tapitrisa amin'ny Orange County tonga amin'ny 2019, manasongadina ny hery ara-toekarena amin'ny dia iraisam-pirenena sy ny anjara asany amin'ny famerenana amin'ny laoniny ara-toekarena an'i Anaheim," hoy i Junior Tauvaa, Chief Sales Officer, mitsidika an'i Anaheim. “Toeram-pivarotana lohahevitra sy fiantsenana kilasy eran'izao tontolo izao, Anaheim sy Orange County dia hitarika ho an'ny mpitsidika iraisam-pirenena hatrany.”
FITSABOANA NY PALMA LEHIBE
Tany Greater Palm Springs, ny mpitsidika iraisam-pirenena dia nahatratra 10% tamin'ny fandaniana fizahan-tany talohan'ny areti-mandringana, na mihoatra ny iray tapitrisa tapitrisa dolara tamin'ny taona 2019.
"Vonona sy faly izahay handray tsara ireo mpitsidika iraisam-pirenena tafaverina soa aman-tsara," hoy ny Fitsidihana sy ny CEO an'ny Greater Palm Springs, Scott White. “Amin'ny fiverenan'ireo hetsika soniavinay — hatramin'ny herinandro modernista, festival mozika sy sarimihetsika ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena toa ny BNP Paribas Open, sy ireo hotely sy hotely nohavaozina vao haingana, tsy fotoana tsara kokoa hitsidihana an'i Greater Palm Springs izany.”
Any San Diego, ny mpitsidika iraisam-pirenena dia nahatratra 24% tamin'ny fandaniana fizahan-tany talohan'ny areti-mandringana.
"Fantatray fa zava-dehibe ny fitsangatsanganana iraisampirenena ho an'ny fahasalamana ankapobeny amin'ny toekarem-pizahantany San Diego, ary fantatray koa fa ireo mpitsangatsangana iraisam-pirenena dia miantsoantso hiverina any San Diego," hoy ny filoham-pirenena sy filoham-pirenena misahana ny fizahan-tany San Diego Julie Coker. “Raha ny marina, nanambara ny British Airways fa hanohy ny serivisy tsy miato mandritra ny herintaona eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina Heathrow any London sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena San Diego noho ny fangatahana mihoapampana. Na dia mbola lavitra aza ny lalana tokony hiverenantsika amin'ireo nomerao talohan'ny areti-mandringana, dia mbola miakatra hatrany ny isan'ny mpandeha an'habakabaka iraisampirenena ary nihoatra ny 140% ny volana aogositra tamin'ny taon-dasa. "
Tany San Francisco, ny mpitsidika iraisam-pirenena dia nahatratra 62% tamin'ny fandaniana fizahan-tany talohan'ny areti-mandringana.
"Ny firongatry ny fahalianana notaterin'ny mpiara-dia aminay, UK, Alemana, Frantsa ary India taorian'ny fanambarana nataon'ny White House dia tongasoa ary fambara tsara amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina", hoy i Joe D'Alessandro, filoham-pirenena sady CEO an'ny San Francisco Travel Association . “Faly ny olona hitsidika sy hiaina ny sehatry ny fandraharahana mahandro, kolontsaina ary hetsika ao an-tanàna mahafinaritra, ary tsy andrintsika ny fandraisana azy ireo hiverina.”
Ny traikefa malaza eto San Francisco sy ny fandraisana ny fahasamihafana miandry ny mpitsidika, ary koa ny manintona vaovao, trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana nisokatra tato anatin'ny 18 volana. Ny fisakafoanana ao an-tanàna dia novain'ny firongatry ny safidy alfresco ankehitriny satria lasa "parklets" maharitra.
Ny fandaharam-potoana sy seho feno dia feno ao anatin'izany ny "Illuminate SF", ny fetiben'ny haitao mandritra ny volana maro; "Ry San Francisco malala", ode vaovao iray vaovao ho an'i San Francisco ao amin'ny Club Fugazi, ilay toerana nisy ilay "Beach Blanket Babylon," ary "BratPack" izay tantara an-tsehatra mivantana nankalazana ireo sarimihetsika malaza tamin'ny taona 80 natolotr'i Feinstein's ao amin'ny The Nikko.